Ukwelashwa nokuvimbela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ungayisebenzisa kanjani i-Amoxicillin 1000?
Inyosi impova yesifo sikashukela
Ungayidla kanjani i-bee stew nesifo sikashukela Izici ezinenzuzo zesitshulu sezinyosi zazaziwa endulo. AmaGrikhi namaRoma abize umkhiqizo wenyosi - "uthuli olunika impilo." ...
Uyini umehluko phakathi kwe-glucophage ejwayelekile ne-glucophage ende
Uyini umehluko phakathi kwe-glucophage ejwayelekile ne-glucophage ende? Ngubani ohlangane neGlucophage, uyazi ukuthi yi-Biguanide - umenzeli onciphisa ushukela wegazi. ...
I-Cardioactive Taurine: Imiyalo yokusebenzisa i-CardioActive Taurine ilungiselelo le-metabolic equkethe ingxenye ye-taurine. ...
Ungayithatha kanjani i-metformin 850 yokunciphisa umzimba
I-Metformin 850: Imiyalo esetshenziswayo, ukubuyekezwa kanye nama-analogues I-Metformin iyinto exhumene nama-Biguanides. I-Metformin umuthi wezokwelapha osetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. ...
Ukucindezela kwesifo sikashukela i-mellitus: indlela nezimbangela zokuthuthuka kwe-pathology
Ukuthi umfutho wegazi uguquka kanjani nesifo sikashukela i-mellitus Diabetes mellitus kanye nomfutho wegazi kuhlobene kakhulu. Umfutho wegazi ophakeme kushukela yisibonakaliso esivame kakhulu. ...
Yini engcono phasostabil noma cardiomagnyl?
Isenzo se-Pharmacological Indlela yokusebenza yesenzo se-acetylsalicylic acid (ASA) isuselwa ekuvinjelweni okungenakuphikwa kwe-cycloo oxygenase (COX-1), ngenxa yalokho i-syntomboxane A2 synthesis ivinjiwe futhi ukuhlanganiswa kweplateletels kucindezelwe. ...
Umuthi Glidiab MV: imiyalo yokusebenzisa, ukubuyekezwa
I-Pharmacodynamics ne-pharmacokinetics I-Gliclazide yisidakamizwa somlomo we-hypoglycemic esihlobene nokususelwa kwesizukulwane sesibili se-sulfonylurea. ...
Umfutho wegazi ophezulu kushukela: ukondleka, amakhambi abantu nezidakamizwa
Izimbangela zokuthuthuka Kubantu abanesifo sikashukela sohlobo loku-1, umfutho wegazi ophakeme ezimweni eziningi awenzeki ngokushesha, kodwa uqala ngemuva kweminyaka embalwa. Ku-70% yeziguli ezine-hypertension, ezinye izifo (nephropathy, izifo zenhliziyo) zihlobene. ...
I-Emoxipin - imiyalo esetshenziswayo nefomu lokukhulula, ukwakheka, umthamo, izinkomba kanye nentengo
Isenzo se-Pharmacological Emoxipine (INN - Emoxipine) siyi-angioprotector esinciphisa izinga lokutholakala kodonga lwe-vascular ngenxa yokusheshisa kwenqubo yamahhala yemithi, futhi isidakamizwa siyi-antioxidant ne-antihypoxant. ...
Ungawandisa kanjani umsebenzi we-pancreatic futhi usebenze? Ungayibuyisela kanjani i-pancreas, imisebenzi yayo
Ungawandisa kanjani umsebenzi we-pancreatic futhi usebenze? Ungawasekela kanjani ama-pancreas ngemithi yesintu nemithi. Kungumzimba obhekele ukwenziwa kwama-enzyme. ...
I-Milgamma - ukwakheka nobubanzi besicelo
Ukukhishwa kwamafomu nokwakhiwa kwamafomu wesilinganiso seMilgamma: Isixazululo sokuphathwa kwe-intramuscular (intramuscular): uketshezi olubomvu olucacile (2 ml in ampoules engilazi emnyama, ama-5 ama-PC. ...
Izici kanye nokulebula kwama-syringes I-syringe iyithuluzi lezokwelapha lokwethula uketshezi emzimbeni womuntu noma ususe kuwo. Siqukethe isitsha, ipistoni, okudala ingcindezi nenaliti. ...
Isifo sikashukela i-insipidus isifo sikashukela siyindlela engandile ye-endocrine, ecasulwa ukuntuleka emzimbeni we-antidiuretic hormone (vasopressin). ...
Combogliz Prolong analogues Kuleli khasi kukhona uhlu lwazo zonke izithonjana Combogliz Prolong ngokwendlela yokwakhiwa kwayo nezinkomba zokusetshenziswa. Uhlu lwe-analogues eshibhile, futhi ungaqhathanisa izintengo emakhemisi. ...
Amakhompiyutha eTroxevasin: Imiyalo esetshenzisiwe
I-Toxivenol I-Toxivenol yezidakamizwa iyi-ejenti hemostatic, angioprotector, kanye nesidakamizwa esinciphisa ukuqina kwe-capillary. ...
Izici zokusebenzisa uwoyela wembewu emnyama ye-caraway kushukela sikashukela i-mellitus Black caraway yembewu iyathandwa emithini yesintu, ivame ukusetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela. ...
Imithi ephumelelayo yesifo sikashukela: uhlu, imiyalo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Imithi ephumelelayo yesifo sikashukela: uhlu, imiyalo yokusetshenziswa nokubuyekezwa Isifo sikashukela manje sithinta inani elandayo labantu. Kokubili abadala nezingane bayahlupheka ngakho. ...
Ungaselapha kanjani isifo sikashukela? Isifo sikashukela i-mellitus senzeka ngenxa yokungasebenzi kahle kwamanyikwe. ...